बिराटनगरमा अचम्म? प्रेमिकाले यसरी पारिन् प्रेमीको नीजि भाग चट – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/बिराटनगरमा अचम्म? प्रेमिकाले यसरी पारिन् प्रेमीको नीजि भाग चट
विराटनगरमा अचम्म भएको छ । त्यहाँ एक प्रेमिकाले आफ्नै प्रेमीको नीजि भाग चट पारिदिएको खबर छ । प्रेमिकाको शं का प्रेमीले धोका दिन लागेको भन्ने थियो ।
उक्त शं काकै कारण यस्तो घ टना भएको हो । घटना भने विराटनगर – १५ रानीस्थित होटल मकालुमा भएको प्रहरीले बताएको छ । धोका दिन लागेको भन्दै प्रेमिकाले आफ्नै एक प्रेमिको लिं ग का टी दिएको घ टना बाहिर आएको हो ।
ती युवती सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका २ घर भइ विराटनगरमा डेरी गरि बस्दै आएकी थिइन् । २८ वर्षिय प्रेमिकाले २७ वर्षीय प्रेमिको २७ साउनमा होटलको कोठामा यस्तो घ टना गरिदिएको जानकारी प्रहरीले दिएको छ । । होटलमा लगेर बल पूर्वक क र णी गर्न खोजिएको भन्दै ती युवतीले युवकमाथि त्यस्तो घ टना गराएको प्रहरीले बताएको छ ।
घ टना विवरण अनुसार युवती कल्पना बिष्ट (नाम परिवर्तन) बर्जुदेखि काम खोज्दै विराटनगर आएर एक इन्सुरेन्स कम्पनीमा जागिर पनि पाइन् । कामको सिलसिलामा आशाको अनिल थापा (नाम परिवर्तन) सँग एक वर्ष अघि चिनजान भयो । नेपाल प्रहरीमा जागिरे युवाको युवतीसँग निक टता बढ्दै जान्छ ।
केटाको घरपरिवारदेखि आउँदो मंसिरमा अर्कै केटीसँग बिवाह हुने चर्चा चलेको थियो । त्यसपछि केटाले केटीलाई मतलव गर्न छोडेका थिए । केटीले केटाको नयाँ नम्बर पत्ता लगाएर फोन गरेर होटलमा बोलाएको र यस्तो घ टना गराएको बुझिएको छ ।
घ टनापछि तुरुन्तै कोशी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेका थप उपचारको लागि नोबेल टिचिङ्ग हस्पिटलमा १० टा चा लगाएपछि उनको अवस्था अहिले ठिक हुदै गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । युवक अहिले प क्राउ परेका छन् । दुबै तस्वीर प्रतिकात्मक